Trump: Kurdiyiinta ma ahan malaa'ig; PKK-na waxay ka xun tahay ISIL
Madaxweynaha Mareykanka ayaa difaacay go'aankiisa uu ciidamada Ameerkaanka uga soo saarey Suuriya.
WASHINGTON, US – Madaxweyne Donald Trump, ayaa bogaadiyey go’aankiisa lama filaanka ee uu ciidanka Ameerikaanka kaga soo saarey Suuriya, isaga oo ku sifeeyay "mid qurux badan oo Istaraatiijiyeed".
Kurdiyiinta gulufka milatari ee balaaran kala kulmay dalka Turkiga ayaa waxa uu Trump ka dhawaajiyey "in aysan ahayn malaa'ig".
PKK – Xisbiga Shaqaalaha Kurdiyiinta – ee dagaalka hubeysan kula jira Ankara ayuu qeexay "in ay ka khatar badan yihiin halista argagixisadda ee ka imaaneysa kooxda la baxday dowladda Islaamka.
"Hadda PKK, oo qayb ka ah Kurdiyiinta, sida aad og-tahay, waxay ka xun yihiin argagixisadda, waxayna leeyihiin khatar argagixiso oo ka balaaran dhinacyadda ISIL," ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweynaha.
PKK ayaa waxaa koox argagixiso ah u aqoonsan wadamadda Mareykanka, Midowga Yurub iyo dalka ay ka dagaalanto ee Turkiga.
"Uma socdo in aan ku lug-yeesho dagaalka u dhaxeeya Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan marka, hadii aad eegto Kurdiyiinta, mar kale aniga oo xormeynaya, iyagu ma ahan malaa'ig," ayuu daboolka ka qaadey Trump.
Ciidamada Dimoqraadiga ee Suuriya oo ay barataaraan Xoogaga Difaaca Kurdiyiinta ee YPG, ayaa la aas-aasey 2015-kii, waxayna ka caawiyeen Mareykanka gulufka ka dhanka ah maleyshiyaadka Daacish.
Xukuumadda Ankara ayaa shaaca ka qaadey in howlgalkeeda ka socda waqoyga Kuuriya uu ka dhan yahay YPG, oo ay u aqoonsan tahay koox argagixiso ah oo gacansaar la leh falaagada hubeysan ee loogu yeer PKK.
Su'aal la geliyey xaalka Trump markii uu la kulmay mas'uul qaba Corona
Caalamka 12.03.2020. 19:50
Xilka ka qaadista Trump oo waji cusub yeelatay xili la helay marqaati kale
Caalamka 18.11.2019. 14:19
Trump oo ka hadlay cudur fara kulul ku haya Mareykanka
Caalamka 27.04.2019. 06:04
Trump oo si adag kaga falceliyey hogaamiyeyaasha "ku maadeystay"
Caalamka 04.12.2019. 19:42
Baarlamaanka Mareykanka oo cambaareeyay talaabadda Trump
Caalamka 16.10.2019. 22:51
Lix sifo oo Trump Donald uu ku tilmaamay Abuubabar Al-Baqdaadi
Caalamka 27.10.2019. 17:38
Soomaaliya oo baaq kasoo saartey dib-u-qaabaynta ururka IGAD 14.07.2020. 19:25
Goobta lagu hayo dhakhaatiir ay Al-Shabaab afduubatay oo la shaaciyey 14.07.2020. 19:01
DF oo 20-kun oo Doollar "ku bixisay" daaweynta is-miidaamiye fashilmay 14.07.2020. 16:45